Gootummaa irraa maayii! Urjicha murataa! Siidaa cichoomina kaayyoo! Bu’uura aantummaa sabaa! Dambalii onnee guutuu! Qabsaa’aa Jaal Marroo-Kumsaa Dirribaa!!! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsGootummaa irraa maayii! Urjicha murataa! Siidaa cichoomina kaayyoo! Bu’uura aantummaa sabaa! Dambalii onnee guutuu! Qabsaa’aa Jaal Marroo-Kumsaa Dirribaa!!!
Tarban har’aati ture. Wal ga’ii seena-qabeessa Muummicha Ministeeraa Itoophiyaatiin durfamuun murtoo jabaa tokko dabarsuun kan goolabame ture.
###Boqonnaan marii iiti aanu akkamitti, hoggansa eenyuutiin, tooftaa waraanaa itti opireeshinichi raawwachuu qabutu eegalame.
#Garuu, hayyichi saayinsii waraanaa fi ogeessa tikaa fiixa irra jiru; fakkeenya dhaloota har’aa kan ta’e gootichi Jaal Marroon bilbila isaa kan biroo irratti divert godhee fayyadamuun opireeshinicha ‘Yaalii Seena-qabeessa’ akka jerhamu taasise.
Laal Mudhii goota
ilaa akka ittii bareeduu
hidhaanoo ilaa mudhii goota(*2)
WBO WBO Koo Akkasiin olee
Goota Ijaa barbadaa #Jaal Booruufi jaalan kiyyaa
Jirra Jirra Akkasiin jirra
“Oromoota heddutu mana hidhaa soosteenyaa poolis xaabiyaa jedhaame beekamu keessatti argama. Haa ta’u malee kanneen hundaa firaaf matiin deemani ilaalus ta’e dubbisuun ni dandaa’ama. Garuu Koloneel Gammachuu Ayyaanaa erga gaafa qabame namni akka hin arginef dhorkamee jira. Mana murtiittis hin dhihaanne, bakka jiruttis waan gaafatama jiru hin qabu. Hidhaamtoota biroo irraa bakka qofatti hidhaame jira. Kun maalif garuu? Hangaa yommitti Oromoo Gidirsuuf karoorfatte garuu opdon?
Mana ho’aafi bal’aa keessa
Siree fufurdaarra ciistee
Isa waan gaarii siif godhe
Waaqayyoon yaadachuu dhiiste…
Utuu suufiifi gaabii uffattee
Sagal – kudhan nyaattuu nyaata
‘Galata kee yaa Rabbii’ jechuun
Dhagaa caalaa sitti ulfaata.
Kaan garuu eelaa rakkinaa
Imimmaaniin jiisee lafa
Qorra sammuu waadu keessa
Bixxillee gogaarra rafa
Kabaan jiruusaa ciccitee
Bitaafi mirgaan itti qaawwa
Kanaaf jiraachuu dadhabee
Baduu yaada – du’uu hawwa.
Ati garuu quufa malee
Hin agarre hir’uu cabduu
Amaluma sitti ta’ee
Waakkii barte utuu qabduu
Haroo guddaan coba jechuun
Gaarummaa Waaqaa ganuudha
Kophee dhabuu keef hin boo’iin
Kan miila hin qabne danuudha!
Ammaan booda Oromoon #Jawar_Mohammed harka dhahu Oromoo osoo hin ta’in #Harreedha. Maaliif yoo jettan afaan damma godhatee Oromoo harka rukuchiifchaa ABO irratti shira guddaa kan xaxaa ture Jawar Mohamed ta’uun bira ga’amee jira. Oromoon bilisoomee jira jedhee afaan qofa osoo hin ta’in hanga hudduun isaa banamutti OPDO aangeessuuf #Jimmaa_fi_Ciroo irratti wanti inni alba’e haalaan nama gaddisiisa. Gafaa Wallaggaa dhaqee Uummaata haasofsiisee warra soddaa jedhee sobee faarsee uummata Oromoo Wallaggaa dubbachiisee maqaa isaanii OPDOf kennee kan hiisisaa jiru fi ficcisiisa kan jiru Jawar Mohamed ta’uu uummatni Oromoo hundi bekka. Kan OPDOdhaan wal ta’ee Oromoo Wallaggaa fi Gujii ficcisiisa kan jiru Jawar Mohamed dha. Jawarii Mohamed diina Bilisummaa Uummaata Oromoodha irraa of egaa. ABOtu Oromoo addaan qoqqodaa jira jedhee dubbate. Garuu kan ifa baafatee Bitamtoota akka Kamaal Galchuutiin wal ta’ee Oromoo gandaa fi amantiidhaan qoqqoodee kan rukuuchiisaa jiruuf kan tokkummaa Oromoo dhiigaan ijaarame doolaaratti dabarsee kan gurgurachaa jiruu diinni oromoo kan ta’ee hin guddaani Jawar Mohamed ta’uu hubadhaa yaa uummata Oromoo.
Ammas taanaan Qabsoon bilisummaa Oromoo gantuu akka Jawar Mohamediin hin maseenu. Rakkoon tokko hin jiru ABOn yoomi iyyuu ni injifata. Jawar bitamtuu fi OPDOn ishee yoomi iyyuu mo’amtuu dhaa uummatni keenya abdii hin kutatinaa.
Gaazexeessaa daldalaan kuni waa’ee Bilisoomuu Oromoo mitii gabroomuu Oromoollee waan irraa beeku hin qabu.
Nama miiraa malee dhiira miti.
Akkuma Re’eetti baalasaa quufannaan iyyaa oola.Waan ganama jedhe galgala osoo gaafatanii waan beeku hin qabu.
Bilisoomuu fi gabroomuu Oromoo qabsa’oota Oromoo umuriisaanii guutuu itti fixatan,waan itti dhaban.
#DaawudIbsaa faa gaaffaa,isaantu beeka!
Jawar bitamtuun Siicoo Seenaa ti!
OPDO’n Suusii Ityoophiyumma Malee Suusii Oromiyaa fi Oromummaa hin qabdu!!
OMN: “Dubbii Cirodhumte” kutaa xumuraa.
Amaana enyutuu it kenee??Who are you?? Talk to much! Cadre OPDO!
Ethiopian Amharic News Today የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ፍኖተ ካርታ ወደየት አለ?